China dorpshipping Mubatsiri webasa uye mumiririri | Sunson
Kudonhedza ibhizimusi rakakura modhi kune vanoshuvira vezvemabhizimisi kutanga nazvo nekuti zvinowanikwa. Ne kudonhedza, iwe unogona kukurumidza kuyedza akasiyana bhizinesi mazano ane mashoma kuderera, izvo zvinokutendera iwe kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ekusarudza uye kushambadzira mune-zvinoda zvigadzirwa. Heano mamwe ezvimwe zvikonzero nei kudonhedza iri yakakurumbira modhi.
1. Mari shoma inodiwa
Pamwe mukana wakakura wekudonhedza ndeyekuti zvinokwanisika kuvhura ecommerce chitoro pasina kudyara zviuru zvemadhora mukugadzira kumberi. Pachivanhu, vatengesi vaifanirwa kusunga yakawanda mari yekutenga zvivakwa.
Nemuenzaniso wekudonhedza, haufanire kutenga chigadzirwa kunze kwekunge watotengesa uye wabhadharwa nemutengi. Pasina chakakosha kumusoro-kumberi kwekutsvaga mari, zvinokwanisika kutanga kutsvaga zvigadzirwa uye kuvhura rakabudirira kudonhedza bhizimusi nemari shoma kwazvo. Uye nekuti hauna kuzvipira kutengesa-kuburikidza nechero chinhu chakatengwa kumberi, senge mune yechinyakare bhizinesi rekutengesa, pane njodzi shoma inosanganisirwa kutanga kudonhedza chitoro.
2. Zviri nyore kutanga
Kumhanyisa ecommerce bhizinesi kuri nyore kwazvo kana iwe usingafanire kubata nezvinoitika zvigadzirwa. Nekudonhedza, haufanirwe kunetseka nezve:
Kugadzirisa kana kubhadhara imba yekuchengetera
Kurongedza uye kutumira maodha ako
Kuchengeta huwandu hwezvikonzero zve accounting
Kubata kudzoka uye kuendesa mukati
Kuramba uchihodha zvigadzirwa uye kugadzirisa stock stock
3. Yakadzika pamusoro
Nekuti iwe haufanire kubata nekutenga zvinyorwa kana kugadzirisa imba yekuchengetera, yako yepamusoro mari yakaderera chaizvo. Muchokwadi, akawanda anobudirira anodonhedza zvitoro anomhanyisa semabhizinesi epamba, anoda zvishoma kupfuura laptop uye mashoma anodzokororwa mari yekushandisa. Sezvo iwe uchikura, izvi zvinodhura zvinogona kuwedzera asi zvicharamba zvakadzikira zvichienzaniswa neizvo zvetsika zvidhinha-uye-dhaka mabhizinesi.
4. Nzvimbo inochinjika
Bhizinesi rekudonhedza rinogona kumhanyisa kubva chero kwese kune internet kubatana. Chero bedzi iwe uchigona kutaurirana nevatengesi uye vatengi zviri nyore, unogona kumhanya uye kubata bhizinesi rako.
5. Wide sarudzo yezvinhu zvekutengesa
Sezvo iwe usingafanirwe kufanotenga-tenga zvinhu zvaunotengesa, iwe unogona kupa akawanda ezvinoitika zvigadzirwa kune vako vanogona vatengi. Kana vatengesi vakatenga chinhu, unogona kuchinyorera chiri kutengeswa kuchitoro chako chepamhepo pasina imwezve mari.
6. Zviri nyore kuyedza
Kudonhedza inzira inobatsira yekuzadzisa kune vese kuvhura chitoro chitsva uye kune varidzi vebhizimusi vari kutsvaga kuyedza iyo vatengi vechido vane zvimwe zvigadzirwa zvezvikamu, semuenzaniso, zvishongedzo kana zvizere zvitsva mitsara yechigadzirwa. Kubatsira kukuru kwekudonhedza ndiko, zvakare, kugona kunyora uye kungangotengesa zvigadzirwa usati wazvipira kutenga huwandu hwakawanda hwehuwandu.
7. Zviri nyore kuyera
Nebhizinesi retsika rekutengesa, kana iwe uchigamuchira katatu nhamba yeodha, iwe unowanzo fanirwa kuita katatu zvakapetwa nebasa. Nekushandisa kudonhedza vanopa pasi, rakawanda rebasa kugadzirisa mamwe maodha rinotakurwa nevatengesi, zvichikubvumidza iwe kuti uwedzere nemarwadzo mashoma ekukura uye riwedzere basa rinowedzera.
Kukura kwekutengesa kunogara kuchiunza rimwe basa - kunyanya rine chekuita nerutsigiro rwevatengi - asi mabhizinesi anoshandisa chiyero chekudonhedza zvakanyanya zvine hukama neyakajairwa ecommerce mabhizinesi.
Tanga bhizinesi rako rekudonha nhasi